Gym ခဏနားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဝိတ်အဆမတန်တက်မလာအောင် ဒီလိုအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလိုက်နာပါ။ - For her Myanmar
Gym ခဏနားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဝိတ်အဆမတန်တက်မလာအောင် ဒီလိုအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလိုက်နာပါ။
၂ လနားပြီး ဝိတ်ကျသွားသဖြင့် ပျော်ရွှင်နေသော ချိမ ပါနော်
Gym စစဆော့ချင်းတုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်ခဲ့ဖူးတယ် ‘သြော် ငါတစ်သက်လုံး ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲလေးနဲ့ တစ်သက်လုံးသေချာလုပ်သွားမယ်ပေါ့။’ ဒါပေမဲ့လည်း အကြောင်းကိစ္စလေးတွေ ရှိလာတဲ့အခါ (ပျင်းတာလည်း ပါတာပေါ့လေ) ဒီ Gym ကို အနည်းနဲ့အများတော့ နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာပဲလေ။ အဲ့တော့ ဒီလိုနားထားတဲ့အချိန်နဲ့ Gym ပြန်မဆော့ခင် စပ်ကြားလေးမှာ ဝိတ်မတက်အောင် ဘယ်လိုထိန်းမလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ နှင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ယှဉ်ပြီး ပြောပြပေးသွားမှာပါနော်။
သြော် တစ်ခုအရင်ပြောရဦးမယ်။ တချို့တွေကပြောကြတယ်။ Gym ဆော့နေတာကို ရပ်လိုက်ရင် ဝ,လာတယ်တဲ့။ အမှန်တော့ အဲဒါမဟုတ်ပါဘူးနော်။ Gym ဆော့နေတုန်းအချိန်ကျတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ သိပ်သိပ်သည်းသည်းမို့ ပိုပိန်သယောင်ယောင် ထင်နေရပြီး Gym ဆော့တာ ရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ အသားက ပွသွားတာမို့ အနည်းငယ်ပဲ ကွာသွားမှာပါ။ ဟိုလိုမျိုး ဘုတ်ပြဲကြီးဖြစ်လာတာတော့ ကိုယ့်ရဲ့မဆင်မခြင်စားသောက်တတ်တဲ့ ပါးစပ်ကြောင့်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ကဲ ဒါဆို ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ဆက်ပြီး လေ့လာရအောင်နော်..
(၁) စိတ်အလိုကို ပါးစပ်ကမလိုက်ပါနဲ့။
အားလုံးထဲမှာ ဒါက အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ အရင် Gym ဆော့နေတုန်းအချိန်မှာကျတော့ အနည်းဆုံး ကိုယ်စားတဲ့ မာလာရှမ်းကောတစ်ပွဲစာလောက်က အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်ထုတ်တဲ့ ချွေးတွေ၊ အားအင်တွေထဲမှာ ပါသွားသေးတယ်။ အခုလို Gym ရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်စားသမျှကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းက ဒိုင်ခံလက်ခံပြီး ပြန်ထုတ်တာဆိုလို့ အင်အင်းပဲရှိတာမို့ (စားနေတုန်းဖတ်မိရင် ကန်တော့ပါ။) စိတ်က မာလာရှမ်းကောတိုင်း ကိုယ်က လိုက်မကောပါနဲ့။ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့သွားပါလိမ့်မယ်နော်။
Related Article >>> ဗိုက်အဆီကျဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် (၃) ချက်
(၂) အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ ပြန်လုပ်ပေးပါ။
အကယ်၍ ကိုယ်ကအခုချိန်မှာ ခဏနားထားတာဆိုပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်ပြန်ဆော့မယ်လို့ တွေးထားရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းကို နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပြန်ပြီး လုပ်ပေးပါနော်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာက ယောင်းရဲ့ Stamina (သက်လုံ) ကို မလျော့သွားစေသလို ပြန်ဆော့တဲ့အခါကျရင်လည်း ခန္ဓာကိုယ်က မဟားဒရား နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၂၀ လောက်ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးပါလို့။
(၃) အချိုနဲ့ တခြားအဆီအဆိမ့်၊ အသင့်စား အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ပါ။
အပေါ်မှာကကျတော့ ပါးစပ်အလိုမလိုက်ခိုင်းတာ ဒီမှာကကျတော့ လုံးဝမစားနဲ့လို့ ရှောင်ခိုင်းတာပါနော်။ အချိုဆိုတာ သကြားတစ်ခုတည်းကို ပြောတာမဟုတ်ဘဲ ယောင်းတို့နေ့တိုင်းသောက်နေကျ အချိုရည်၊ ကော်ဖီ၊ လ္ဘက်ရည် အာလူးကြော် စတာတွေကလည်း ယောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုစုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို အားပေးတာမို့ အဲဒီအစားအသောက်တွေကိုလည်း လုံးဝလုံးဝ မစားဖို့ နှင်းက တားမြစ်ချင်ပါတယ်။
Related Article >>> ဘယ်အချိန်မဆို Strict ဖြစ်နေတာက အပြစ်ကြီးတစ်ခုလား?
(၄) ရေများများ သောက်ပါ။
ရေက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပြေစေသလို အဆီပိုရှိနေရင်လည်း ချေဖျက်ပေးတာမို့ ဘာမှတခြားဟာတွေကို ထူးထူးခြားခြား အားမထုတ်နိုင်ရင်တောင် ရေဘူးကို အနားထားပြီး ရေအမြဲတမ်း သောက်စေချင်ပါတယ်။
(၅) ခဏနားလို့ရတယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားပါ။
တချို့တွေကရှိတယ်။ မဖြစ်မနေမို့သာ နားလိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှာက ငါနားလိုက်ရင် ဝ,လာတော့မှာပဲ ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရော။ အဲဒီစိတ်ဖိစီးမှုက ယောင်းတို့ကို ပိုပြီးပင်ပန်းစေတဲ့ပြင် စိတ်ဖိစီးလို့ထွက်လာတဲ့ ဟော်မုန်းက ယောင်းတို့ကို ပိုပြီး ဝ,စေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်နားတဲ့အချိန်မှာ ဘာကိုမှ စိတ်ထဲစွဲမထားဘဲ အပြည့်အဝ နားစေချင်ပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေက ကြည့်တော့သာ လွယ်နေတာ၊ တကယ်တမ်း လိုက်နာရမယ်ဆို သိပ်တော့မလွယ်လောက်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဒီလောက်တော့ ထိန်းသိမ်းပေးရမှာပေါ့လေ။ အကယ်၍ လုပ်ရတာအခက်အခဲတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ကွန်မန့်မှာပြောခဲ့နော်။ နှင်းတတ်နိုင်သလောက် ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်ပါမယ်ရှင့်။ အားလုံးပဲ တာ့တာ!!!
၂ လနားပွီး ဝိတျကသြှားသဖွငျ့ ပြျောရှငျနသေောခြိမ ဖွဈနတော
Gym စစဆော့ခငျြးတုနျးကတော့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထငျခဲ့ဖူးတယျ ‘သွျော ငါတဈသကျလုံး ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို စှဲစှဲမွဲမွဲလေးနဲ့ တဈသကျလုံးသခြောလုပျသှားမယျပေါ့။’ ဒါပမေဲ့လညျး အကွောငျးကိစ်စလေးတှေ ရှိလာတဲ့အခါ (ပငျြးတာလညျး ပါတာပေါ့လေ) ဒီ Gym ကို အနညျးနဲ့အမြားတော့ နောကျဆုတျလိုကျရတာပဲလေ။ အဲ့တော့ ဒီလိုနားထားတဲ့အခြိနျနဲ့ Gym ပွနျမဆော့ခငျ စပျကွားလေးမှာ ဝိတျမတကျအောငျ ဘယျလိုထိနျးမလဲဆိုတာကို ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ နှငျးရဲ့ ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံလေးနဲ့ယှဉျပွီး ပွောပွပေးသှားမှာပါနျော။
သွျော တဈခုအရငျပွောရဦးမယျ။ တခြို့တှကေပွောကွတယျ။ Gym ဆော့နတောကို ရပျလိုကျရငျ ဝ,လာတယျတဲ့။ အမှနျတော့ အဲဒါမဟုတျပါဘူးနျော။ Gym ဆော့နတေုနျးအခြိနျကတြော့ ခန်ဓာကိုယျက ကဈြကဈြလဈြလဈြနဲ့ သိပျသိပျသညျးသညျးမို့ ပိုပိနျသယောငျယောငျ ထငျနရေပွီး Gym ဆော့တာ ရပျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာကတြော့ အသားက ပှသှားတာမို့ အနညျးငယျပဲ ကှာသှားမှာပါ။ ဟိုလိုမြိုး ဘုတျပွဲကွီးဖွဈလာတာတော့ ကိုယျ့ရဲ့မဆငျမခွငျစားသောကျတတျတဲ့ ပါးစပျကွောငျ့လို့ပဲ ပွောပါရစေ။ ကဲ ဒါဆို ဘာတှလေုပျရမလဲ ဆကျပွီး လလေ့ာရအောငျနျော..
(၁) စိတျအလိုကို ပါးစပျကမလိုကျပါနဲ့။
အားလုံးထဲမှာ ဒါက အရေးအကွီးဆုံးပဲ။ အရငျ Gym ဆော့နတေုနျးအခြိနျမှာကတြော့ အနညျးဆုံး ကိုယျစားတဲ့ မာလာရှမျးကောတဈပှဲစာလောကျက အားကစားလုပျတဲ့အခြိနျထုတျတဲ့ ခြှေးတှေ၊ အားအငျတှထေဲမှာ ပါသှားသေးတယျ။ အခုလို Gym ရပျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျစားသမြှကို ခန်ဓာကိုယျတဈခုတညျးက ဒိုငျခံလကျခံပွီး ပွနျထုတျတာဆိုလို့ အငျအငျးပဲရှိတာမို့ (စားနတေုနျးဖတျမိရငျ ကနျတော့ပါ။) စိတျက မာလာရှမျးကောတိုငျး ကိုယျက လိုကျမကောပါနဲ့။ ဒုက်ခနဲ့လှလှ တှသှေ့ားပါလိမျ့မယျနျော။
Related Article >>> ဗိုကျအဆီကဖြို့အတှကျ မဖွဈမနသေိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ (၃) ခကျြ
(၂) အိမျတှငျးလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ ပွနျလုပျပေးပါ။
အကယျ၍ ကိုယျကအခုခြိနျမှာ ခဏနားထားတာဆိုပမေဲ့ တဈခြိနျခြိနျပွနျဆော့မယျလို့ တှေးထားရငျတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို နညျးနညျးဖွဈဖွဈ ပွနျပွနျပွီး လုပျပေးပါနျော။ ဒီလိုလုပျပေးတာက ယောငျးရဲ့ Stamina (သကျလုံ) ကို မလြော့သှားစသေလို ပွနျဆော့တဲ့အခါကရြငျလညျး ခန်ဓာကိုယျက မဟားဒရား နာကငျြကိုကျခဲနတောမြိုး မဖွဈတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တဈနကေို့ မိနဈ ၂၀ လောကျဖွဈဖွဈ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှေ လုပျပေးပါလို့။
(၃) အခြိုနဲ့ တခွားအဆီအဆိမျ့၊ အသငျ့စား အစားအသောကျတှကေို ရှောငျပါ။
အပျေါမှာကကတြော့ ပါးစပျအလိုမလိုကျခိုငျးတာ ဒီမှာကကတြော့ လုံးဝမစားနဲ့လို့ ရှောငျခိုငျးတာပါနျော။ အခြိုဆိုတာ သကွားတဈခုတညျးကို ပွောတာမဟုတျဘဲ ယောငျးတို့နတေို့ငျးသောကျနကြေ အခြိုရညျ၊ ကျောဖီ၊ လ်ဘကျရညျ အာလူးကွျော စတာတှကေလညျး ယောငျးတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီပိုစုတဲ့လုပျငနျးစဉျကို အားပေးတာမို့ အဲဒီအစားအသောကျတှကေိုလညျး လုံးဝလုံးဝ မစားဖို့ နှငျးက တားမွဈခငျြပါတယျ။
Related Article >>> ဘယျအခြိနျမဆို Strict ဖွဈနတောက အပွဈကွီးတဈခုလား?
(၄) ရမြေားမြား သောကျပါ။
ရကေ ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ပွစေသေလို အဆီပိုရှိနရေငျလညျး ခဖြေကျြပေးတာမို့ ဘာမှတခွားဟာတှကေို ထူးထူးခွားခွား အားမထုတျနိုငျရငျတောငျ ရဘေူးကို အနားထားပွီး ရအေမွဲတမျး သောကျစခေငျြပါတယျ။
(၅) ခဏနားလို့ရတယျ ဆိုတဲ့စိတျကိုထားပါ။
တခြို့တှကေရှိတယျ။ မဖွဈမနမေို့သာ နားလိုကျရတာ စိတျထဲမှာက ငါနားလိုကျရငျ ဝ,လာတော့မှာပဲ ဆိုတာမြိုးဖွဈနရေော။ အဲဒီစိတျဖိစီးမှုက ယောငျးတို့ကို ပိုပွီးပငျပနျးစတေဲ့ပွငျ စိတျဖိစီးလို့ထှကျလာတဲ့ ဟျောမုနျးက ယောငျးတို့ကို ပိုပွီး ဝ,စတောကွောငျ့ ဖွဈနိုငျရငျ ကိုယျနားတဲ့အခြိနျမှာ ဘာကိုမှ စိတျထဲစှဲမထားဘဲ အပွညျ့အဝ နားစခေငျြပါတယျ။
ဒီအခကျြလေးတှကေ ကွညျ့တော့သာ လှယျနတော၊ တကယျတမျး လိုကျနာရမယျဆို သိပျတော့မလှယျလောကျဘူးနျော။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျ့ကနျြးမာရေးအတှကျ၊ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဒီလောကျတော့ ထိနျးသိမျးပေးရမှာပေါ့လေ။ အကယျ၍ လုပျရတာအခကျအခဲတဈခုခုရှိနတေယျဆိုရငျလညျး ကှနျမနျ့မှာပွောခဲ့နျော။ နှငျးတတျနိုငျသလောကျ ပွနျဖွပေေးပါ့မယျ။ ခုတော့ ဒီလောကျနဲ့ပဲရပျလိုကျပါမယျရှငျ့။ အားလုံးပဲ တာ့တာ!!!
Tags: break, Food, gym, maintain, Muscle, Rest, strict, Weight
Hnin Ei Oo March 21, 2019